ALAROBIA 21 OKTOBRA 2020
FANJIFANA : Mety hiakatra 7,5 % ny vidin-jiro sy rano vokarin’ny JIRAMA manomboka ny 1 jolay
Hiampy indray ny fahasahiranan’ny vahoaka madinika satria dia milaza hampiakatra ny vidin-jiro sy rano vokariny ny orinasam-panjakana Jirama. 30 juin 2017
Amin’ny fiandohan’ny volana jolay izao, izany hoe rahampitso, no voalaza fa hiakarany raha araka ny fanitsiana vaovao notapahin’ny komity mpitantana sy ny Mpitondra fanjakana.
Ireo manao asa fivelomana mila herinaratra sy ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany no tena hibaby ny vokatr’ity fiakaran’ny herinaratra ity. Izy ireo anefa dia azo lazaina fa anisan’ny mamelona ankohonana maro ary etsy an-kilany dia maro ireo misehatra amin’ny asa tena amin’izao fotoana izao ka tsy afaka hiala amin’ny Jirama izy ireo.
Na dia mbola tsy ofisialy aza io fiakaran’ny vidin’ny herinaratra io dia tsy azon’ny Mpitondra ihodivirana satria efa nisy ny fanambaràna nataon’ny Talen’ny Jirama vaovao, Jaomiary Olivier raha nanomboka nandray ny asany izy ny 3 mey lasa teo. Nambarany tamin’izay fotoana izay fa tsy maintsy hisy io fanamboarana ny vidin-jiro sy rano io mba hahafahana manarina ny orinasa noho ny fatiatonka miavosa.
Nambarany ihany koa fa amidy fatiantoka amin’ny mpanjifa ny iray KW amin’ny herinaratra noho ny fiakaran’ny vidin-tsolika. Tamin’ny taona 2016, ohatra, dia manodidina ny 3 000 ariary no tokony hivarotana ny iray Kw ho an’ny mpanjifa saingy latsaky ny 1 000 Ariary no nivarotana izany ka nahatonga ny Jirama mitady fanampiana.
Hatramin’izay dia manodidina ny 340 miliara Ariary ny fanampiana omen’ny Fanjakana ny Jirama mba hahafahana manentsina io fatiantoka io. Tamin’ity taona 2017 ity aza dia efa tafakatra hatrany amin’ny 450 miliara Ariary io fanampiana ara-bola io. Tanjona kosa anefa ny hampihena io fanampiana io ary tsy hisy intsony izany amin’ny taona 2021 raha araka ny fanambaràna nataon’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Etsy an-kilany anefa dia efa manomboka hampiasaina amin’ireo milina vaovao etsy Mandroseza ilay menaka mavesatra vokarina any Tsimororo. Nanambara ny Jirama fa tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro ho an’Antananarivo manomboka izao saingy ny vidin’ny herinaratra izao mety hisondrotra izao. Tsy maintsy hisy fiantraikany ratsy eo amin’ny seha-pihariana sy ny sosialim-bahoaka anefa izany.
Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (98) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020 Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY (61) 16 octobre 2020 “Mahalany potika plastika 125g isam-bolana ny mpanjifa hazan-dranomasina ” FAKO (52) 19 octobre 2020 Nasaina nitatitra ny asa vitany ireo Governora 18 efa voatendry FILAN-KEVITRA TANY ANTSOHIHY (51) 16 octobre 2020